Etu ibudata Windows 10 n'efu na serial | Akụkọ akụrụngwa
Yesnyaahụ wepụtara otu akụkọ kachasị mkpa maka ndị niile na-eji sistemụ arụmọrụ Windows na kọmputa ha; N'ụzọ doro anya, aha ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ nke ga-adị site n'etiti 2015 agaghị abụ nke a nụchara asịrị na weebụsaịtị dị iche iche kama, nke dị na Windows 10.
A tọhapụrụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ akụkọ na n'etiti nke, ụfọdụ ghọrọ akụkọ zuru oke ma na-atọ ụtọ, otu ihe anyị na-atụ aro ka ị gụọ n'ihi na mgbe inweela Windows 10 a n'aka gị, ihe nwere ike ịbụ n'oge a dị ka isiokwu a ga-akụziri gị ibudata ụdị ọhụụ a nke sistemụ arụmọrụ kpamkpam n'efu yana nọmba ọnụọgụ gụnyere.
1 Kedu ihe m chọrọ iji budata Windows 10 na nọmba ọnụọgụ gụnyere?
2 Ndị ọzọ iji wụnye Windows 10
Kedu ihe m chọrọ iji budata Windows 10 na nọmba ọnụọgụ gụnyere?
Microsoft kwupụtara ya ụnyaahụ n'otu n'ime nkwupụta ya, ya bụ, nke ahụ onye ọ bụla nwere ike ibudata nsụgharị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ha (Windows 10), ka ha nwee ike ịnwale ma gbanwee maka uru ọhụrụ nke nyocha a ga-enye. Maka nke a, enweghị ụdị mmachi banyere ojiji ọ bụrụhaala na a nabatara ma kwanyere ụkpụrụ ikikere nke Microsoft tụpụtara ùgwù; Mgbe ahụ anyị ga-atụ aro ka ị soro usoro usoro ole na ole ka ị nwee ike ibudata Windows 10 na nọmba ọnụọgụ nke otu ndị ahụ nyere na Microsoft.
Mepee ihe nchọgharị Internetntanetị nke ị na-ejikarị akaụntụ Microsoft gị arụ ọrụ (nke nwere ike ịbụ Hotmail na Outlook.com).
Banye na nzere nnweta nnabata na nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a.
Ugbu a gaa na ukara website nke Onye nyocha Microsoft.
Ga-ahụ ihuenyo dị nnọọ ka nke anyị ga-agwa n’okpuru, ịnwe pịa bọtịnụ ahụ kwuru “Jikọọ ugbu a".
Emechaa, a ga-anabata gị ịnabata usoro ikikere ojiji ojiji Windows 10 nke Microsoft tụrụ aro.
Na windo na-esote ị ga-pịa njikọ dị na ala (na-acha anụnụ anụnụ) nke ga-eme ka ị nwee ike ịbanye na windo nbudata Windows 10.
Isi na ala na- họrọ ka oyiyi Windows 10 ISO na ị nwere mmasị na nbudata.
N'elu bụ nọmba Oghere Usoro nke ị ga-eji wụnye 10, nke ị ga-idetuo na mado na dọkụmentị ka ị wee nwee ya na kọmputa gị.
Ndị a dị mfe nzọụkwụ na mgbe ogologo oge ị ga-enwe ya na gị onwe onye na kọmputa ebudatara na oyiyi Windows 10 ISO; N'oge a enwere nanị asụsụ ole na ole maka ụdị ikpe a nke sistemụ arụmọrụ Microsoft, yabụ anyị ga-echere oge tupu asụsụ ndị ọzọ (gụnyere Spanish) ka akwadoro anyị.
Ihe ruru ịdị arọ nke onyonyo ISO gafere 3 GB, yabụ ị ga-enwerịrị ohere zuru ezu na ebe ibudata faịlụ a kwuru.
Ndị ọzọ iji wụnye Windows 10
Ozugbo ibudatara Windows 10 ịkwesịrị ịga n'ihu ịwụnye ya dịka ọkwa nke ahụmịhe gị; N'aka nke anyị, anyị nwere ike ịkwado ụzọ ole na ole ọzọ iji rụọ ọrụ a, nke bụ ihe ndị a:
Sistemụ arụmọrụ arụmọrụ. You nwere ike ịdabere na otu n'ime ọtụtụ ngwa iji mepụta igwe arụmọrụ na ebee, ị ga-eji onyogho ISO (yana akara akara) nke ibudatara na mbụ.
Dual buut sistemụ. I nwekwara ike wụnye Windows 10 na kọmputa gị site na ịhọrọ otu nkebi maka mmetụta; Ebe ọ bụ na ọ bụ ụdị ikpe, 20 GB nwere ike ịbụ karịa oke maka nkebi a ebe ị ga-etinye sistemụ arụmọrụ.
Maka nke abụọ ọzọ anyị kwuru, ị ga-adịrịrị mkpa nyefee ọdịnaya niile nke onyonyo ISO ka mkpanaka USB ma ọ bụrụ na kọmputa gị enweghị diski tray. Maka ụdị ikpe a, anyị na-akwado jiri a pụrụ iche ngwá ọrụ, nke anyị kwurula banyere ya na mbụ.
Mmelite: Edere isiokwu a na 2014 mgbe Windows 10 ka dị na mmepe. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ozi emelitere ọzọ gaa na edemede a iji wụnye windo 10
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi ebudata Windows 10 na akara akara gụnyere
Ihe 26 kwuru, hapụ nke gị
Akwụkwọ ikike ahụ anaghị agwụ na Eprel 2015?
Zaghachi Renzo Collantes Valer
Echere m na ọ bụ. Mana ọnụọgụ ikike enyere, na ule nrụnye m niile (andlọ na ụlọ ọrụ) achọrọghị. Daalụ maka ozi ahụ, anyị nwere ezigbo onyinye mgbakwunye na anyị niile ga-abanye na akaụntụ n'ezie.
onye n’enye m windo ikike mmeghe windo 8.1 maka faaa
Ezigbo isiokwu. Ọ dị njọ na ha anaghị enye nsụgharị Spanish, ma ọ bụ enwere ike ịgbanwe asụsụ ahụ?
Zaghachi Juan Chirinos
Ezigbo Juan, enweghị ngwugwu dị na Spanish, mana MIcrosoft ga-atụ aro ya dị ka ngwugwu iji budata dị ka mmelite ma ọ bụ dịka faịlụ. M ga-atụ aro ihe atụ maka ya maka Windows n'ozuzu, ọ bụ ezie na etinyere ya na Windows 7 site na oge ekwuru ngwugwu. Ekele gị ma daalụ maka ọbịbịa gị.
Daalụ Mr. Rodrigo maka ụdị nzaghachi na nlebara anya gị. Jiri obi ekele.
Zaghachi Juan Pablo Chirinos
Obinna 33 dijo
enwere ezigbo ihe ize ndụ maka pc gị?, ị maara ịbụ beta na ule,. daalụ!
E nweghị ihe ize ndụ n'ihi na ọ bụ ihe ukara version na bụghị pirated. Ekwadoro m ịwụnye Windows 10 na ngalaba diski iji rụọ ọrụ na ngwaike ahụ na ọ bụghị ịkọwapụta. Daalụ maka ọbịbịa gị.
Ajuju m bu n'ihi na inwe boot abuo na Linux, oburu na w10 buut na enye gi nsogbu nile, ajuju m bu ma nke a puru ime dika beta, ya na ngbanwe nke m chere n’echiche a gha enwe! ,, ekele
Onwe m, enwere m Windows 7 Ultimate, Windows 8.1 Pro na Windows 10, yabụ nhọrọ 3 ahụ gosipụtara na Boot Manager. Agaghị m ama banyere Linux na bootloader, dịka ọ bụ eziokwu ihe ị kwuru, na mgbe ụfọdụ Windows na-emebi ya. Amaghị m ma ọ bụrụ na enwere ike ịme ya na nke gị, mana Linux na-arụ ọrụ n'ozuzu na njedebe, nke mere na njikwa ya na-emeri. Daalụ maka mmasị na nleta m enwere m olile anya na onye ọzọ ọkachamara na Linux, nwere ike inye nkọwa n'okwu ahụ.
Rodrigo, ị nwere ike ịgwa m ma ọ dị mkpa ịmanye mkpebi ahụ.
Marc ... adịghị mkpa ịmanye mkpebi ahụ, n'ihi na ị nwere ike iji nwayọ soro onye gị na ya rụburu ọrụ. N'ezie, nke a dabere na Windows 10 amatalarị eserese gị. N'okwu m enweghị nsogbu na enweghị m nsogbu na 1920 × 1080 px. Ekele na ekele maka ikwu na nleta.
NKP Marklin dijo
Enwere m Windows 8.1 Enwere m ike ịwụnye W10 n’elu ma ọ bụ ọ kwesịrị ịkpụzi
Zaghachi JR Marklin
Mgbe melite a ufọk ufene version na a ikpe version. Ekwadoro m ka ịmepụta nke diski diski na njikwa Windows disk ka ị ghara idafu ozi ahụ (echere m na ị maara etu esi eme ya) wee wụnye Windows 10. I nwekwara ike ịmepụta igwe mebere n'agbanyeghị, ọ bụ adịghị irè. Ekele na ekele maka nleta gị na ikwu.
Nke mbụ gbasara okwu GNU / Linux, Windows na-eji bootloader (echetaghị m aha ya: S) yana GNU / Linux na-eji ndị ọzọ, onye njikwa Windows anaghị adaba na GNU / Linux, yabụ ọ bụrụ na ị wụnye Windows n'akụkụ ihe nkesa dị ugbu a, onye njikwa ya ga-ehichapụ GRUB na mbido nkesa gị ga-apụ n'anya yana ka iweghachite GRUB bụ ọgba aghara ka mma, ọ kachasị mma ịwụnye Windows na mbụ GNU / Linux.
Na Windows 10, anaghị m etinye ya, ọ bụrụ na nwere Windows 8.1 enwere m mkpebi na nsogbu ọkwọ ụgbọ ala, kedụ ihe ndị ọzọ m ga-enwe na nke ọhụrụ na-enweghị mgbagha n'ihi mmepe?
JJ, ọ bụrụ na ị nwere Windows 8.1 Enwere m ike ịgwa gị na ị nwere ike iji Skype Translator ugbu a ... enwetarala m ọkwa ahụ ka ị wee nwee ike ịkparịta ụka ugbu a na ndị enyi si mba ndị ọzọ jiri nsụgharị na oge. Ekele na ekele maka okwu gị.
M malitere nbudata nke onye nhazi na Spanish. N'ihe banyere ịkụcha Grub, ụzọ dị mma iji weghachite ya nwere ike ịbụ site na ngwaọrụ EasyBCD n'efu.
Echere m na na 6400 Dell Inspiron 2007 laptọọpụ (4GB na SSD) ọ ga-aga dị ka ogbugba. W7 ijiji….
Morningtụtụ ọma m wụnye free echichi ugbu a, ọ na-ajụ m ka itinye nkwado isi na enweghị m ya dị ka m na-eme
Zaghachi ka dilia pernida
Ndewo, enwere m ajụjụ na-enweghị onye nwere ike idozi m. Enwere m windo 7-bit windo 32 kọmputa (ọ bụ ezie na kọmputa m na-akwado 64-bit), agbagoro m na windo 10 ma o doro anya na ọ tinyela 32-bit system. Enwere m ike ịnweta windo 10 64-bit n'ụzọ ụfọdụ, na-abụghị ịkwụ ụgwọ? Okwuntughe m bụ nke mbụ
Nbudata ya na weebụsaịtị ọ bụla. Gbalịa ịme akwụkwọ nke ihe gị tupu ... ọ bụrụ na.
Zaghachi ka javicalavera7
Rodrigo, kedu ka m nwere ajuju? Amaghi m nke ukwu ma abughi m onye nzuzu, mana enwere ihe m amaghi na m ga-enwe obi uto ma oburu na ị zaa na m nwere igwe Asus ma o biara nye m Windows 7 sistemụ na Spanish m emelitere na Windows 10 ma gụọ ya na ọ nwere ike ịnwe karịa sistemụ arụmọrụ na igwe ọ nwere ike ịbụ? Olee otú m ga-esi mee ya? Ajụjụ ọzọ bụ etu m ga-esi ekewaa diski m n’agaghị efufu ihe ọ bụla (foto, vidiyo, wdg.) Ọ bụrụ na m nwere usoro sistemụ arụnyere, amaghị m ma ọ bụrụ na ị ghọtara m, nwee nwute maka nsogbu ahụ ma kelee gị nke ukwuu ukwuu
Zaghachi Richard ¨villero¨ Fernandez
Ọnye na -bụ Ricardo Rivera? dijo
Ndewo, ehihie ọma, mgbe m na-emelite, o nyere m nhọrọ nke pendriver, nke dị ike, mana ọ na-ajụ m maka ikike ma ọ bụ hapụ ya ma ọ bụrụ na m hapụ ya, kedu ihe na-eme m nwere ike ịnweta ya ma ọ bụ rụọ igwe ahụ
Zaghachi Ricardo Rivera
Oghere Usoro ahụ anaghị arụ ọrụ maka m. Onwere onye n’enye m ozo ma obu keygen?
Hernan Camilo dijo
Cordial greetings ,,, daalụ nke ukwuu maka onyinye mana okwuntughe apụtaghị, naanị m na-ahụ MediaCreationTool ..
Obinna 70 dijo
onye na enyere m aka achọrọ m igodo windo 10
Zaghachi na nary70
Ahụghị m Oghere Usoro ahụ
Ndụmọdụ 10 iji chekwaa ndụ batrị na ama gị